PressReader - Isolezwe: 2018-04-13 - Ngiyethemba Inkatha isengaphatha – Zondi
Ngiyethemba Inkatha isengaphatha – Zondi
Isolezwe - 2018-04-13 - IZINDABA - MLUNGISI GUMEDE
OWAYENGUNOBHALA-jikelele we-IFP osathatha umhlalaphansi kwezombusazwe, uMfundisi Musa Zondi uthi ukholwa ukuthi iNkatha inabo abaholi abangakwazi ukuhola iqembu uma Inkosi Mangosuthu Buthelezi isizibeke phansi izintambo.
Engxoxweni neSolezwe oLundi, uZondi uthe bakhona abaholi inkinga nje ukuthi bazolandela abaholi abebeqotho.
“Ubuholi boMntwana waKwaPhindangene akulula ukuqhathaniswa nabo. Namagalelo akhe ayabonakala, hhayi lapha KwaZulu-Natal kuphela kodwa eNingizimu Afrika yonke nasemhlabeni jikelele, ngakhoke kuzomele basizwe abaholi abazolandela kuShenge, bakwazi ukwenyusa amasokisi, ukuze uma sebengena bezogiya ngesihlangu soMntwana okuyisihlangu esikhulu.”
Uthe ngokubona kwakhe amandla e-IFP ayabuya ngemuva kokuthi ike yathi ukwehla kancane.
“Isimo sezombusazwe asimi ndawonye, i-IFP siyazi ukuthi ike yaba iqembu elikhulu nelike laphatha kulesi sifundsazwe futhi mina ngiyakholwa ukuthi isangaphatha. Lokho kungenzeka kuphela uma kuzoqeqeshwa abantu abazoba ngabaholi ukuze basebenze ngobuqotho baphume benze umsebenzi ofunwa ngabantu, iqembu le-IFP lenze omningi umsebenzi kodwa alisakhunjulwa futhi alisabongwa,” kusho uZondi.
Ebuzwa ukuthi angabonakala yini ekhuza ibuya kwezombusazwe, uZondi uthe kusinwa kudedelwane.
UZondi manje osegxile ebhizinisini nakumsebenzi wobizo lokuba ngumfundisi, wesula kwezombusazwe ngo-2012, ngemuva kokuzimbandakanya nezombusazwe iminyaka engaphezu kuka-30.
Ngesikhathi eshiya kwezombusazwe, wayengomunye wabaholi okwakubhekwe kubona ukuthi bangathatha isihlangu soMntwana wakwaPhindangene uma esezibeka phansi izintambo zokuhola iqembu.
UButhelezi ngonyaka odlule umemezele ukuthi uzozibeka phansi izintambo zokuhola iqembu, inhlangano yabe isiphakamisa igama leMeya yaKwaHlabisa uMnuz Velenkosini Hlabisa njengo muntu ophakanyiselwe esikhundleni sikaButhelezi.
UHlabisa uyena kuphela ophakanyiselwe kulesi sikhundla kodwa yize kunjalo leli phephanda selithole ngemithombo yalo eminingi ku-IFP ukuthi ukhona omunye omholi weqembu odumile okumhlahlandlela osiconsela amathe lesi sikhundla sokuhola i-IFP kodwa ongakaphumeli obala.
Lo mholi kuthiwa useqalile ukuzama ukukhankasa emazikweni nakwizinhlaka zeqembu njenhloso yokuzwa amanzi ngobhoko.